केशब स्थापित भन्छन्–म त ठूलो कुरा गर्नै जन्मिएको हो क्या (भिडिओसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
प्रकाशित मिति : 2022 May 10, 3:15 pm
काठमाडौं, २७ बैशाख। काठमाडौं महानगरमा नेकपा (एमाले) बाट मेयरका उम्मेद्धवार केशब स्थापितले आफ्नो मुख्य एजेण्डा भनेको पार्टीको नीतिअनुसार समाजवादको आधार तय गर्नु रहेको बताएका छन् । उनले पार्टीले घोषणा गरेअनुसार समाजवादको आधार तयार पार्न जग हाल्ने बताए ।
उनले काठमाडौंमा कुनै समस्या नरहेको जिकिर गरे । हिजो राति प्राइम टीभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले काठमाडौं ईश्वरहरुको ठाउँ रहेको उल्लेख गर्दै यहाँको सभ्यता जोगाउनेगरि आफूले काम गर्ने सुनाए ।
उनले काठमाडौं महानगरका सबै समस्या समाधान गर्न आफूसँग सूत्र रहेको पनि सुनाए । स्थापितलाई पत्रकार धमलाले ‘तपाईमाथि त उद्दण्ड बनेको आरोप छ नि ?’ भनेर तेर्साएको प्रश्नमा उनले भने–‘म त ठूलो कुरा गर्नै जन्मिएको हो क्या, महत्वकांक्षी नै हो । सानो कुरा गरेर हुन्छ ? कुण्ड कुण्ड कुरा गरेर हुन्छ ? यो शहरी सेवा केन्द्र हुन्छ । म २० वटा ट्वाईलेट बनाउँछु । महिलामैत्री शौचालय बनाउँछु ।’ उनले साईकल चढ्ने संस्कारको पनि विकास गर्ने जनाए । उनले बाग्मती र धोविघाट कोरिडोर आफूले खोलेको पनि दाबी गरे ।
इम्बोस्ड प्लेटविरुद्ध मसाल जुलुस (फोटोफिचर)
काठमाडौं, २३ जेठ । सरकारले १ साउनबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नराखे कारबाही गर्ने भनेपछि विरोध